Xog: Sababta Qoor Qoor u diiday inuu wada-hadal la galo Ahlu-Sunna iyo arrin uu dalbaday | Dalkaan.com
Home Warkii Xog: Sababta Qoor Qoor u diiday inuu wada-hadal la galo Ahlu-Sunna iyo...
Xog: Sababta Qoor Qoor u diiday inuu wada-hadal la galo Ahlu-Sunna iyo arrin uu dalbaday
Dhuusamareeb (dalkaan) – Maamulka Galmudug ayaa ku gacan seeray inuu wax wada-hadal ah la galo kooxda Ahlu-Sunna Waljamaaca oo dhowaan dib u qabsatay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug.
Dhaq-dhaqaaqyo ciidan ayaa laga soo tabinayaa deegaanka, waxayna siyaasiyiinta kasoo jeedo Galmudug aragtiyo kala duwan ka bixiyeen sida loo wajahayo kooxdaan soo rogaal celisay ee Ahlu-Sunna.
Inta badan siyaasiyiinta kasoo jeeda 11-ka beel ee ku midoobay Galmudug ayaa si buuxda garab istaag ugu muujiyey maamulka Galmudug, iyagoo Ahlu Sunna ku tilmaamay koox jabhad ah oo qabsatay dhul nabad ah oo uu maamul ka jiro, waxayna ku baaqeyn in maamulka Galmudug lagu garab siiyo inuu xaqiijiyo amniga deegaanka iyo inuu gacantiisa kusoo celiyo deegaankii laga qabsaday dhawaan.
Dhinaca kale, waxaa jiro dhowr siyaasi oo kasoo jeedo Galmudug oo ku baaqay in xiisadda taagan lagu xaliyo wada-hadal, balse Galmudug ayaa u aragtay siyaasiyiintaas inay yihiin kuwii ka shaqeeyey in Ahlu-Sunna ay dib usoo rogaal celiso.
Ugaaska Beesha Cayr oo markii hore ku baaqay inuu kala dhex galo maamulka Galmudug iyo Ahlu-Sunna ayaa dib uga laabtay mowqifkiisa taasoo loo arkay in Galmudug ay qaadatay go’aan ah inaysan wada-hadal la gelin kooxda Ahlu Sunna .
Sida ay xaqiijiyeen illo wareedyo ku dhow hoggaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor, maamulka Galmudug ayaa ka biyo diiday inuu wax wada-hadal ah la galo koox kusoo duushay deegaan nabad ah oo uu maamulkaas ka talinayey.
Sida wararka sheegayaan, Qoor Qoor ayaa aaminsan in kooxdaan ay tahay jabhad kusoo duushay deegaan nabad ah, sidaas darteedna uusan marnaba wax wada-hadal ah la geli doonin illaa ay ka baxaan deegaanada ay qabsadeyn.
Ahlu Sunna ayaa diiday inay isaga baxdo magaalada Guriceel oo ay dhawaan la wareegtay, waxaana fashilmay isku day la doonayey in magaalada looga saaro.
Previous articleDaawo: Beesha Murusade oo ka digtay cawaaqib ka dhalan kara go’aanka Puntland
Next articleTaliska Booliska oo war kasoo saaray afduubkii lagu eedeeyey Taliye Xijaar
Ankara (Caasimada Online) – Turkey ayaa si caro leh uga jawaabtay heshiis hub oo balaayin dollar ah oo ay saxiixdeen France iyo Greece, ayada...
Hordhac: Arsenal Vs Aston Villa ee Horyaalka Premier League, Bukayo Saka...
Daawo: Beesha Murusade oo ka digtay cawaaqib ka dhalan kara go’aanka...
Muxuu CUMAR Cabdirashiid ku macneeyey arrinta ay ku dhaqaaqday Somaliland?
Mushaharka uu doonayo Mohamed Salah oo la ogaaday si Heshiiska Cusub...
Somaliland oo u hanjabtay ergadii afka duubatay ee ka qeyb gashay...